यी हुन् वैज्ञानिकहरुले पनि सुल्झाउन नसकेका दुनियाका १३ रहस्य
क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा भेटिएका हिँड्ने पत्थरहरुको राज के हो ? रुसको मस्कोमा भेटिएको तीन हजार वर्ष पूरानो फलामे पेचको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ? प्राचीन मेक्सिकन शहरमा आर्किटेक्टले के सोचेर अभ्रख (माइका) को प्रयोग पर्खालमा गरेका थिए ? संसारमा यस्ता कैयन रहस्यहरु छन्, जसलाई अझैसम्म पनि भूगर्भविद् तथा वैज्ञानिकहरुलेसमेत सुल्झाउन सकेका छैनन् ।
पृथ्वीमा यस्ता धेरै रहस्यहरु लुकेको पाइन्छ, जसको पर्दा उठ्नु जरुरी छ । वैज्ञानिकहरु यी रहस्य सुल्झाउन लागेको धेरै भयो । यस विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ, तर रहस्य जहाँको तहिँ । आउनुस् आज हामी तपाईंलाई दुनियाँका यस्ता १३ रहस्यको बारेमा जानकारी दिँदैछौं, जसलाई आजसम्म वैज्ञानिकहरुले समेत सुल्झाउन सकेका छैनन् ।
आफैँ हिँड्ने पत्थर
क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा केही पत्थरहरु आफैं घिर्सिरहेका छन् । यो कुरा नासाका वैज्ञानिकहरुका लागि एउटा ठूलै रहस्यको रुपमा खडा भएको छ । रेसट्रयाक प्लाया क्षेत्र २.५ माईल उत्तर-दक्षिण तथा १.२५ माईल पूर्व-पश्चिम समथर छ । यहाँ १ सय ५० भन्दा बढि यस्ता पत्थर छन्, जुन आफैँ घिर्सिरहेका हुन्छ । (सापो) तस्वीरमा पनि तपाईंले घिर्सिएको डोब देख्न सक्नुहुन्छ । तर आँखाकै अघि घिर्सिएको भने देख्न सकिन्न । यी पत्थरहरु एक पटकको जाडोयाममा करिब २५० मीटरभन्दा बढि घिर्सिने गरेको पाईन्छ ।
१९७२ मा यस रहस्य सुल्झाउन वैज्ञानिकहरुको एक टीम बनेको थियो । पत्थरको एक ग्रुपको नामाकरण नै गरेर यसमाथि करिब ७ वर्ष अध्यन गरियो । त्यसक्रममा केरिन नामको ३१७ किलोग्रामको पत्थर ७ वर्षसम्म जहाँकोतहिँ रह्यो । जब अनुसन्धान सकियो, त्यसको ७ वर्षपछि वैज्ञानिकहरु त्यहाँ पुगेर हेर्दा त केरिनले १ किलोमिटर दूरी पार गरिसकेको रहेछ । तर यो कसरी सम्भव भयो, अझै पनि रहस्यको घेरामा छ ।
कुकुरले आत्महत्या गर्ने पुल
स्कटल्याण्डको डुम्बरटन मिलटन नजिक रहेको ओभरटुन पुलमा कुकुरहरुले आत्महत्या गर्छन् । १८५९ मा बनेको यो पुल कुकुरहरुको आत्महत्याका कारण निकै चर्चामा रहने गरेको छ । तर कुकुरहरु यहीँ आएर किन आत्महत्या गर्छन् भन्ने कुरा अझै रहस्यको घेरामा छ । आत्महत्याको पहिलो घटना १९५०-६० को बीचमा पत्ता लागेको थियो । (सापो) त्यसपछि बर्सेनि सयौं कुकुरहरु यहाँ पुगेर आत्महत्या गर्छन् । अर्को रहस्यमय कुरा के भने यहाँ आत्महत्या गर्ने कुकुरहरु लामो नाकवाला प्रजातिका हुने गरेका छन् ।
सहारा मरभूमीमा दुनियाको सबैभन्दा ठूलो रहस्यको रुपमा रहेको पत्थरको संरचना छ । १९७३ मा पुरातत्वशास्त्रीहरु पहिलो पटक यहाँ पुगेका थिए । १९९८ मा प्रोफेसर फ्रेड वैंडोर्फको टीमले पत्थरबाट बनेको यस संरचनाको बारेमा लामो अध्ययन गर्यो । अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लाग्यो, यो करिब ईसापूर्व ६००० साल पहिले बनाईएको हो । नाब्टा प्लायामा भेटिएको पत्थरको यस संरचनाबारे अर्को तथ्य पनि पत्ता लाग्यो, यो खगोलशास्त्र र ज्योतिषविज्ञानसँग सम्बन्धित छ । नसुल्झिएको प्रश्न यो हो कि, यतिका शताब्दी पहिले ति मानिसहरुले यति धेरै विकास कसरी गरेका थिए । खगोलशास्त्र र ज्योतिस विज्ञान त्यतिबेलादेखि नै अस्तित्वमा थियो ? यो कुरा आजपनि एउटा रहस्यको रुपमा रहेको छ ।
चिनिया म्याजिक लाइन्स
तस्वीरमा देखिएको यो संरचना ४० डिग्री २७’२८.५६ उत्तर तथा ९३ डिग्री २३’२४.४२ पूर्व दिशामा फैलिएको छ । यस डिजाईनको बारेमा ज्यादा जानकारी त उपलब्ध छैन । यो चीनको ‘गानसु शेंग’ मरभूमीमा बनेको छ । सन २००४ मा यसको तस्वीर लिइएको थियो । महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि, यो जाल मेगाओको गुफा आसपासमा बनेको छ । (सापो) जसलाई विश्व सम्पदा सूचीमासमेत समावेश गरिएको छ । रहस्यमय कुरा के भने, पत्थर खाल्टाखुल्टी भएपनि भने सिधा र मानवनिर्मित जस्तै छ । के यसलाई मानिसले नै बनाएका थिए ?
सन १८८९ मा ईदाहोको नाम्पामा एकाएक वैज्ञानिकहरुको समस्या थपियो । कारण थियो, अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको पत्थरको गुडिया । यसलाई मानिसले नै बनाएको हो । पत्थरको यो गुडिया ३२० फिटको गहिराईमा उत्खननका क्रममा भेटिएको थियो । त्यसलाई भेटिएपछि अन्दाज लगाईयो मानव अस्तित्वमा आएपछि नै यो बनाईएको हुनुपर्छ । तर, यसको बास्तविकता के हो भन्ने कुरा अझै पर्दा पछाडिनै छ ।
तीन हजार वर्ष पूरानो फलामको पेंच
१९९८ मा रुसी वैज्ञानिक दक्षिण-पश्चिम मस्कोबाट करिब ३०० किलोमिटरको दूरीमा उल्काको एक अवशेषको जाँच गरिरहेका थिए । यसैदौरान उनीहरुले पत्थरको एउटा टुक्रा भेट्टाए, जसमा फलामको पेच पनि थियो । भू-वैज्ञानिकका अनुसार यो पेच ३०००-३२०० वर्ष पूरानो हो । पत्थरको बीचमा फलामको पेच स्पस्टसँग देख्न सकिनंछ । यसको लम्बाई करिब एक सेन्टिमिटर र ब्यास तीन मिलिमिटर छ । तर यसको बास्तविकता अझै पनि रहस्यको घेरामा नै छ ।
पिरामिड द पावर (Fossilized giant)
यस प्राचीन मेक्सिकन शहरको पर्खाल अभ्रख (Mica) को ठूलो चाक्लोबाट बनेको छ । अभ्रख खानीको कुरा गर्ने हो भने यो ब्राजिलमा छ । तर यो शहरबाट हजारौं माइलको दुरीमा अवस्थित छ । अभ्रखको प्रयोग प्रौद्योगिक र उर्जा उत्पादनमा गरिन्छ । यसमा निकै रहस्यमय प्रश्न के भने, पर्खाल बनाउनका लागि निर्माताले त्यति टाढाबाट ल्याएर अभ्रख जस्तो खनिजको प्रयोग किन गरे होला ? (सापो) के त्यतिबेला नै आर्किटेक्टहरु शहरमा बिजुलीका लागि स्रोतको खोजी गरिरहेका थिए ?
प्राचीन रकेट र जहाज
तस्वीरमा तपाईंले रकेटमा जहाजजस्तै केही आकृति देख्नुभयो ? यो जापनको एक गुफामा बनेको प्राचीन पेन्टिङ हो । यो पेन्टिङ ईशापूर्व ५००० साल अघि बनाईएको अनुमान गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले यो कुरालाई रहस्य मानेका छन्, के त्यती बेला नै रकेट र जहाज थियो ? कि यो कल्पनामात्रै ? कल्पना नै हो भने पनि ठ्याक्कै अहिलेकै जहाजजस्तै कसरी सम्भव भयो ?
पिरामिड अफ अटलान्टिस ?
क्यूबाको निकटमा रहेको तथाकथित यूकेटन खाडीमा वैज्ञानिकहरुद्वारा मेगालिथको खंडहरको रहस्यबारे अनुसन्धान जारी छ । यस खोजमा सो तटीय क्षेत्रमा कैयन माईल यात्रा तय गरिसकिएको छ । जुन अमेरिकी पुरातत्वविद्ले यस स्थान पत्ता लगाए, त्यसपछि उनले तत्काले घोषणा गरे, ‘मैले अटलांटिस खोजेर पत्ता लगाएको छु ।’ अब यो स्थान स्कूवा डाइभर्सका लागि निकै मनपर्ने स्थानमध्ये एक बनिसकेको छ ।
नेवाडाको भीमकाय मानिस (Giants in Nevada)
किम्बदन्ती छ, नेवाडामा रातो कपाल भएको १२ फिट अग्लो मानिस बस्दथ्यो । यो कहानी अमेरिकीहरुद्वारा एक गुफामा एक भीमकाय मानिसको हत्या गरेको कथासँग जोडिएको छ । १९११ मा खोजतलासका क्रममा त्यो भीमकाय मानिसको अस्थिपञ्जर भेटियो । जुन तपाईंले तस्वीरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ । यतिमात्रै होइन, १९३१ मा यस्तै अन्य दुई कंकाल भेटिएका थिए, जसको उचाई ८ देखि १० फिट थियो । यति अग्ला मानिस पनि यो धर्तिमा थिए ? यो कुराले वैज्ञानिकहरुलाई सोच्न बाध्य पारिरहेको छ ।
अकथनीय किलो (Inexplicable Wedge)
१९७४ मा ट्रान्सिलवेनियाको मुर्स नदीमा २०,००० साल पूरानो मैस्तदनको हड्डीसँगै एक एल्मुनियमको किलो भेटियो । त्यसमा किलोमा एक मिलिमीटर मोटो पत्र पनि थियो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो ३००-४०० वर्ष पूरानो हो । आल्मुनियम प्राय अन्य धातुहरुसँग मिश्रितरुपमा पाईन्छ, तर ४०० वर्षअघि यो विशुद्ध आल्मुनियम कसरी पाईयो । जबकी १८०८ भन्दा अघि आल्मुनियमको खोज नै भएको थिएन । यस्तो अवस्थामा ४ सय वर्ष पहिले विशुद्ध आल्मुनियम कसरी सम्भव भयो ?
पत्थरको प्लेटको रहस्य
हालको नेपाल रहेको भूभागमा १२,००० वर्ष पहिले पत्थरबाट बनेको थाली प्रयोग हुने गरेको अनुमान गरिन्छ । यी थालीहरुमा केही यस्ता चित्रहरु छन्, जुन हाल चर्चामा रहेका एलियनहरु जस्तै लाग्छन् । तपाईंले पनि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ । रहस्यमय कुरा के भने त्यतीबेला नै एलियनको कल्पना गरिएको थियो ? होइन भने यस्ता तस्वीरहरुको कल्पना कसरी गरियो ।
विश्व सम्पदा सूचीclose